यू लाइभ - लडकियों संग निःशुल्क यादृच्छिक च्याट
यू लाइभ - लाइभ च्याट रूले र स्ट्रिमिङ
यो च्याटमा एक सन्देश मात्र पूर्ण अजनबीहरूबाट साथीहरू वा प्रेमीहरू बन्द गर्न जान्छ। जब हामी यू जीवित बनायो यो हाम्रो आदर्श वाक्य थियो - र यो अझै पनि आज हो! संसारभरका मानिसहरूसँग च्याट गर्नुहोस्, नयाँ मित्र बनाउनुहोस्, तपाईको प्रेम पत्ता लगाउनुहोस्। Google Play मा U LIVE च्याट डाउनलोड गर्नुहोस् वा तपाईंको ब्राउजरमा अनुप्रयोग सुरु गर्नुहोस्!
किन यू लाइभ
मुख्य विशेषताहरू निःशुल्क छन्
सन्देशहरू पठाउनुहोस्, तपाइँसँग सार्वजनिक कोठामा मनपर्ने व्यक्तिलाई च्याट गर्नुहोस्, मित्र बनाउनुहोस्, आफ्नै लाइभ स्ट्रिम सुरु गर्नुहोस्: यो सबै बिल्कुल निःशुल्क छ।
हामी उच्च गुणस्तरको उत्पादनमा काम गर्यौं
हामी प्रत्येक दिन यू लाइभ च्याटमा सुधार गर्छौं र यसलाई अझ बढि उपयोगी र सुविधाजनक बनाउन चाहन्छु। हामी तपाईंको प्रतिक्रिया धेरै प्रशंसा गर्छौं। कृपया हामीलाई हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि हाम्रो प्रत्यक्ष च्याटमा केहि गलत छ। तपाईंको विचार र सुझावहरू सधैं स्वागत छ। यू यू लाई एक साथ राम्रो बनाउनुहोस!
यू लाइभ मोबाइल-पहिलो र क्रस-प्लेटफर्म हो
हामी मोबाइल-पहिलो संसारमा मोबाइल रहन मद्दत गर्न चाहन्छौं। हामीले आफ्नो प्रत्यक्ष कुराकानी Android, वेब र मोबाइल वेबमा उपलब्ध गरायौं। तपाईं घरमा हुँदा तपाईंको ल्यापटप वा पीसीमा वाइडस्क्रिनको आनन्द लिनुहोस्। बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ? ट्याब्लेट र स्मार्टफोनहरूको लागि सम्पर्कमा रहन र च्याटमा च्याट गर्न अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्।
यू लाइभ मजा छ
हामीले टन स्टिकर प्याकहरू पाएका छौं र कार्डहरू खेल्न सक्छौँ जसले तपाईंको सञ्चारलाई सुधार गर्न र भावना व्यक्त गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ। स्मार्ट टिप्पणीहरू मजाकदार स्टिकरहरू सँगसँगै दुई अजनबीहरूले बरफ तोड्न र एक-अर्कालाई जान्न मद्दत गर्न सक्थे।
हामी तपाईंको सुरक्षाको हेरचाह गर्छौं
मध्यस्थले ट्रक र अपमानकर्तालाई 24/7 मा च्याट गर्न खोज्छन्। कुनै धोखाधडी वा ब्ल्याकमेलिङलाई यहाँ अनुमति छैन। तपाईं शंकास्पद पत्ता लगाउने सबै रिपोर्टिंग गरेर कुनै अनुचित व्यवहार रोक्न हामीलाई पनि मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोलीले तपाईंको रिपोर्टहरू एकैचोटि समयमा प्रक्रिया गर्नेछ।
यू लाइभ कुराकानी सहज र सजिलो प्रयोग हो
तपाइँसँग तपाइँको खाता लाइभ च्याटमा मजा गर्न प्रमाणित गर्न छैन। कुनै पनि टेलिफोन नम्बर वा सामाजिक खाताहरू साइन इन गर्न आवश्यक पर्दछ। हामी पनि जबसम्म हामी चाहानुहुन्छ हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूलाई गुमनाम रहनेछौं।
हाम्रो लाइभ च्याट रूले सुरुवात गर्नुहोस् र तपाईंले स्क्रीनको बीचमा लाइभ स्ट्रीमहरूको सूची देख्नुहुनेछ। तपाईं यहाँसम्मसम्म रहन सक्नुहुनेछ र केवल प्रत्यक्ष स्ट्रीमहरू ब्राउज गर्नुहोस् वा एक विशेष प्रयोगकर्ता फेला पार्न खोजी प्रयोग गर्नुहोस्। एक निजी सन्देश पठाउनुहोस् वा एक निजी भिडियो च्याट सुरू गर्नुहोस् जब तपाइँ कुनै विशेष भेट्नुहुन्छ।
हामीले न्यूनतम जडान आवश्यकताहरू कम गर्यौ र अब तपाइँ इन्टरनेट गुणस्तर को बाहेक कुनैपनि ठाउँबाट पनि बाँच्न सक्नुहुन्छ। अब तपाइँसँग केवल विश्वसँग च्याट गर्नको लागि एक 3G जडान हुन आवश्यक छ।